COVID-19 သုတေသနတွေကို ရုရှားက ခိုးဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း အမေရိကန်၊ ကနေဒါနဲ့ ဗြိတိန် ပြော | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း COVID-19 သုတေသနတွေကို ရုရှားက ခိုးဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း အမေရိကန်၊ ကနေဒါနဲ့ ဗြိတိန် ပြော
MOSCOW, RUSSIA - JULY 7, 2020: Russia's President Vladimir Putin meets with Maxim Akimov, Chairman of the Management Board of Russian Post, at the Moscow Kremlin. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì, ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ ÀÎ "Ïî÷òà Ðîññèè" Ìàêñèìîì Àêèìîâûì â Êðåìëå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ သုတေသနတွေကို ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ ရုရှားက ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနဲ့ ဗြိတိန်တို့က စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကုသဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသန ရလဒ် အချက်အလက်တွေကို ရုရှားက ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း စွပ်စွဲထားတဲ့ နိုင်ငံ အတော်များများရှိပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာတော့ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနဲ့ ဗြိတိန်တို့က ရုရှားဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကုသဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုဟာ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ သုတေသနတွေကို ခိုးယူဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့က ယုံကြည်ပါတယ်။
ရုရှားထောက်လှမ်းရေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ The Dukes ခေါ် Cozy Bear ခေါ် APT29 အဖွဲ့ရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲတဲ့ သုံးနိုင်ငံက တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၆ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း စွက်ဖက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
ဗြိတိန်က ဒီ ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုကို တန်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မဟာမိတ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါမနစ် ရပ်ဘ်က ပြောပါတယ်။
ဘယအြခကွအြလကတြှေ ခိုးယူခံလိုကရြပှီလဲဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။ ရုရှားတာဝနရြှိသူတှကတေော့ ဒီလို ဆိုငဘြာ တိုကခြိုကမြှုမွိုး လုပစြရာ အကှောငြး မရှိကှောငြး၊ အခု စှပစြှဲခကွဟြာ ရုရှား ဆေးသုတသနေ ကွောကြှားမှုကို မှေးမှိနအြောငလြုပဖြို့ ကှိုးစားတာဖှဈကှောငြး ပှောပါတယြ။
MOSCOW, RUSSIA – JULY 7, 2020: Russia’s President Vladimir Putin meets with Maxim Akimov, Chairman of the Management Board of Russian Post, at the Moscow Kremlin. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì, ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ ÀÎ “Ïî÷òà Ðîññèè” Ìàêñèìîì Àêèìîâûì â Êðåìëå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ
COVID-19 သုတသေနတှကေို ရုရှားက ခိုးဖို့ ကွိုးစားနကွေောငျး အမရေိကနျ၊ ကနဒေါနဲ့ ဗွိတိနျ ပွော
ဘယ်အချက်အလက်တွေ ခိုးယူခံလိုက်ရပြီလဲဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။ ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ဒီလို ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုမျိုး လုပ်စရာ အကြောင်း မရှိကြောင်း၊ အခု စွပ်စွဲချက်ဟာ ရုရှား ဆေးသုတေသန ကျော်ကြားမှုကို မှေးမှိန်အောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
Previous articleစပိန်မှာ မြွေပါတွေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လို့ ကောင်ရေ ၁ သိန်းခန့် သုတ်သင်
Next articleဗြိတိန်ဟာ ကျန်းမာရေးလုပ်သား သေဆုံးမှု ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေ